ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး (2) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး (၁)
ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး (၃) →
Posted on November 16, 2013 by chitnge
မေး။ ။ဆရာကြီး ရောဂါက သေဖို့အတွက် အင်မတန် နီးစပ်တယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ဆရာကြီး ဘယ်လိုခံစား ခဲ့ရပါသလဲ??
ဖြေ။ ။ကျွန်တော် ပထမတော့ စိတ်ပျက်ရမလိုလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောဂါက ပိုဆိုးတာမျိုး သိပ်မရှိဘူး၊ နှေးနေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် PhD ကိုလည်း ရအောင်လုပ် ခဲ့တယ်။ ရောဂါရဲ့ ဆိုးဝါးမှုဟာ တော်တော်နှေးနေတာကို သိလာတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တစ်ခါတည်း စကြဝဠာကြီးရဲ့ အရင်းအဖြစ်ကိုရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ (Big Bang) ဆိုတဲ့ သီအိုရီထဲကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ဆရာကြီးအခု နေရထိုင်ရတာ ပျော်ပါရဲ့လား??
ဖြေ။ ။ကျွန်တော် ပျော်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ရောဂါ ဖြစ်စကတော့ ဘဝဟာ ငြီးငွေ့စရာပဲလို့ ခံစားမိတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မသေသေးတဲ့အခါကျတော့ – အသက်ရှင်ရတာ အဖိုးတန်ပါလားလို့ အားတက်မိတယ်။ ဒီအခါမှာ လူသားတစ်ယောက်ဟာ မသေမခြင်း ကြိုးစားပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်အပြတ် ယုံလာခဲ့တယ်။ ဒီလို ကြိုးစားရင်းနဲ့ တကယ်လို့အောင်မြင်ခြင်းရရင် အဲဒီ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အရသာကို ကိုယ့်ဘဝအတွက် တန်ဖိုးထားခံစားရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့် နားလည်မိတယ်။ အမှန်တကယ် စစ်တမ်းထုတ်တော့လည်း လူ့အသိပညာ သမိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ သတ်မှတ်မိပါတယ်။ အများသူငါကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ မသေခင်မှာ အထူးတလယ် ကြိုးစားရင်တော့ တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်ရမှာပဲလို့ နားလည်မိကြောင်း အားပေးလိုပါတယ်။
(I haveareal feeling of achievement that I have madeamodest but significant contribution to human knowledge. .. ..)
မေး။ ။ရောဂါကြားထဲက ဆရာကြီးက အထူးပြုဘာတွေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တာလဲ??
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်ကတော့ ရောဂါကို မေ့ပျောက်ပြီး ကျွန်တော် သိချင်တာကို ဇောက်ချပြီး လေ့လာတာပဲ၊ အဓိကကတော့ စကြဝဠာကြီးဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ် နေသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ရောဂါကြီးရှိလျှက်နဲ့ ဆရာကြီးဟာ အောင်မြင်မှု အစုအပုံအလယ်မှာ ထည်ထည်ဝါဝါ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ငွေကြေးရော လိုသေးသလား??
ဖြေ။ ။(A Brief History of Time) အချိန်၏သမိုင်းအကျဉ်း စာအုပ်က ငွေတော်တော် ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီတော့ပျော်မိတာပေါ့။ ကျွန်တော် တော်တော်လည်း ခံစားရတယ်၊ အံ့သြရတယ်၊ သိပ္ပံပညာကို လေ့လာလိုက်စားရင်း အသစ်အဆန်းတွေ့ရှိမှုတွေကို ကျွန်တော် လူထုပရိသတ်ကို တင်ပြချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ငွေအတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ဆရာကြီးစာအုပ်တွေက နာမည်ကြီးပေမယ့် သူတို့တကယ် ဖတ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား??
ဖြေ။ ။သူတို့ဖတ်ကြပါတယ်၊ အတော်အသင့် အတိုင်းအတာထိတော့ ဖတ်ကြတယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ အတော်အသင့် အတိုင်းအတာထိတော့ နားလည်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပစ်မှတ်ကိုတော့ ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီစကြဝဠာကြီးကို ဘယ်လိုဥပဒေသတွေက ထိန်းချုပ်တယ်၊ အဲဒီ ထိန်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေသကို သိနိုင်ပါတယ်လို့ အားပေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် အောင်မြင်မှု ရတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
မေး။ ။တွင်းမည်းကြီးတွေအကြောင်းတော့ ရုပ်ရှင်အနုပညာတွေကလည်း ရိုက်တယ်နော် —
ဖြေ။ ။ရိုက်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်အနုပညာဆိုတာ တကယ့်အစစ်အမှန် သိပ္ပံလောက် စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးလို့ပဲ ကျွန်တော် ခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြောတဲ့အတိုင်း (Real Science is much more exciting because it is actually happening out there ..) လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဟာကို အဖြစ်မှန်အတွက် အမှန်တရားအတွက် သိရှိနားလည်ရတဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းတွေထက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစားနားလည်ပါတယ်။
တွင်းမည်းကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျွန်တော် တော်တော်များများ လေ့လာပြီးတော့ အသစ်အဆန်း သတင်းတွေကို ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ဆရာကြီးက တွင်းမည်းကြီးထဲအထိ ဆင်းကြည့်ချင်တာလား??
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်က တွင်းမည်းကြီးထဲ ဆင်းကြည့်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ တွင်းမည်းကြီးက အရာရာကို ဝါးမြိုလိုက်လို့ရှိရင်၊ အဲဒီ ဝါးမြိုခံရတဲ့ အရာရာဟာ ဘယ်လိုဘယ်လို ပျက်ဆီးသွားတယ် ဆိုတာကို သိချင်တာပါ။ နောက်ပြီး ဝါးမြိုလိုက်တဲ့ တွင်းမည်းကြီးက ဘာတွေများ သူရရှိခံစားလိုက်သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားတာပါ၊ ရင်ခုန်စွာနဲ့လည်း လေ့လာကြည့်ရှုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တော့ တွင်းမည်းကြီးထဲကို ခုန်ချဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ဆရာက စကြဝဠာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို လေ့လာတော့ ဘာတွေသိသေးလဲ??
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာ အထဲမှာနေပြီးတော့ တွင်းမည်းကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာနေတယ်လေ၊ ဒါကတော့ ဒီလိုပြောရရင် (We are outside the Black Holes, but we are inside the Universe. .. ) လို့ ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ဆရာရဲ့ Hawking Radiation ကတော့ ဆရာ့ရဲ့ ဂုဏ်ကို ဖော်ကျူးနိုင်တာပေါ့နော် —
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်ကတော့ တွင်းမည်းကြီးတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ သူတို့အထဲမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကို သိပ်သိချင်တာပဲ။ နောက်ပြီး သူတို့ထဲကနေပြီးတော့ တစ်ခြားစကြဝဠာကိုများ ရောက်သွားသလားလို့လည်း စပ်စုချင်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုပါ။
(.. what happens to them? Do they get destroyed, or do they pass into another universe? ..)
(အပိုင်း – ၃ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်)
Tags: Radiation, Science, Stephen Hawking
This entry was posted in Articles and tagged Radiation, Science, Stephen Hawking. Bookmark the permalink.